सुख समृद्धिको दृष्टान्त सत्तासीनहरु आफैँ मात्र ? | Ratopati
सुख समृद्धिको दृष्टान्त सत्तासीनहरु आफैँ मात्र ?
personमुक्तिबन्धु exploreकाठमाडौं access_timeचैत १६, २०७५ chat_bubble_outline0
हामीकहाँ अहिले सरकारी पहलमा सजधजका साथ वृहत् समृद्धिपुराण लागेको छ । देशी विदेशी श्रोता उपश्रोताहरु जुटेका छन् । मुलुक जात्रामय बनेको छ । समृद्धिपुराणका वाचक उपवाचकहरु विभिन्न मन्चहरुमा देखिन्छन्, सुनिन्छन् । जो मन्चहरुमा देखिन्छन्, सुनिन्छन् ती एक से एक समृद्ध छन् ।
तिनका निकटतम इष्टमित्र तथा आफन्तहरु पनि समृद्ध छन् । आगन्तुकहरु त यसै समृद्ध छन् । सत्ताका समृद्ध कलाकार वक्ताहरुबाट सुनिने सुखसमृद्धिका सपनाहरु हामी सर्वसाधारण जनताका लागि भने परम्परागत पुराण मन्चहरुमा सुनिने वैकुण्ठका सपनाहरुभन्दा पनि तिलस्मी, रमाइला र रोचक लागेका छन् ।
यसमा विशिेष रोचक पक्ष के पनि छ भने हामीकहाँ वर्तमानमा उदाएका सुखसमृद्धिका मिथक निर्माता र राजनेताहरु आपूm स्वयम् सुख समृद्धिका एक से एक भव्य नमुना एवम्, दृष्टान्तहरु छन् ।
यसरी यहाँ सुखसमृद्धिका सपना पस्कनेहरु महात्मा गान्धीका अनुयायी त हुँदै होइनन् । सर्वहारावर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने परम्परागत राजनीति दर्शन बोकेका राजनेता कार्यकर्ता पनि होइनन् । इमान, जमानका पक्षधर पनि होइनन् । यसैले यिनीहरु भुइँमान्छेका जीवनस्थिति र समस्याबाट कुरा शुरु गर्दैनन् । आधारभूत जनताका जीविका जुटाउने उपायहरुबाट कुरा शुरु गर्दैनन् ।
साँच्चासाँच्ची प्रयत्नका साथ जनजीवन उठाउने योजनाहरुबाट कुरा शुरु गर्दैनन् । नेपाली प्रतिभा र ऊर्जा नेपालमै खपत भएर नेपाल र नेपालीको विपन्न जीवनस्थितिलाई सम्पन्नतामा रुपान्तरण गर्ने योजनाबाट कुरा शुरु गर्दैनन् । यिनीहरु आकाश र समुद्रमा चल्ने जहाज र कल्पनाका लिकहरुमा हुँइकिन रेलहरुबाट कुरा शुरु गर्छन् । कुरैकुरामा देशदेशावरका मानिस जुट्ने जुटाउने र कुरा गर्ने कामहरु त गर्छन्, जनता ढुक्क हुन सकिने भरपर्दो वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्दैनन् ।
परम्परागत शैली र स्वभावका सत्ताका सजिसजाउ मन्चहरु छन् । कामचलाउ श्रोताहरु छन् । रोचक भाका शैलीमा कथा पस्कन जान्ने वाचक उपवाचकहरु छन् । वाचक उपवाचकले यदाकदा पहिरिने मालाको त कुरै नगरौं कुनै पनि पुराणमा नसुनिएका लम्बाइ र तौलका, देख्दै हाँसो लाग्दा फूलमालाहरु समेत छन् । ती माला बोकेर पहिराउने दासानुदास भक्तजनहरु पनि छन् । यसैमा मिथकको मिथकता छ ।
नेपालको राजनीतिमा को पक्ष को प्रतिपक्ष सबै आफ्आफ्ना पन्थका पुराण वाचनमा झुमेका छन् । आफ्ना श्रोतावृन्दबाट स्वागत सत्कारमा उत्तरोत्तर बढी लम्बाइ बढी तौलका मालाधारणका प्रतियोगितामा रमेका छन् । पहिले घाँटीदेखि लत्रेर गोलीगाँठासम्म पुग्ने मालालाई ‘बनमाला’ भनिन्थ्यो, अहिलेको जुग ‘धनमाला’को छ । अहिलेका नेताले आफ्ना अनुयायी भक्तजनहरुबाट स्वागत अर्पणमा पहिराइने मालाका लम्बाइ धरहराले पनि धान्न सक्दैन ! भुइँमा लत्रन आइपुग्छ !! भनेपछि आजका हाम्रा राजनेताहरु धरहराभन्दा पनि अग्ला छन् ! राणाका दरबारहरुभन्दा पनि भव्य छन् !! यो पनि पौराणिक परम्परा उछिनेर अगाडि बढेको हाम्रो राजनीतिको मिथकीय चमत्कार नै हो ।
मूल कुरा यहाँ सुखको छ, समृद्धिको छ । सत्ता राजनीतिको आजको मूल धार सुखसमृद्धि नै हो । सुखसमृद्धि कसको ? सत्तासीन साहुजीहरुको ? अथवा अकिन्चन जनताको ? पुराणमा सवै प्रश्नहरुको तात्विक जवाफ भेटिन्छ नै भन्ने छैन । कति प्रश्नका जवाफ बिपनामा भेटिँदैनन् । चटक, चमत्कारका कुरा अलि बेग्लै हुन् ।
चटक, चमत्कारहरु पनि पहिले पुराणहरुमा सुनिन्थे, अहिले हामीकहाँ चित्रविचित्रका राजनीतिक नाटक मन्चनहरुमा भेटिन्छन् ।
भर्खरैको भेटमा एक जना प्रतिभाशाली तथा उर्जावान् वरिष्ठ पत्रकार भाइले भन्नुभयो, ह्यान्स एण्डरसनको विश्वप्रशिद्ध कथा ‘बादशाहका नयाँ पोशाक’को अनुवाद गर्नुहोस् न ! छपाएर हेरौँ, हाम्रा राजनेताहरुले पढ्लान् कि ?! आत्मबोध गर्लान् कि ? मलाई लाग्यो, भैँसीलाई शास्त्रीय सङ्गीत सुनाएर शास्त्रीय नृत्य नचाउने रहरजस्तो उहाँको परिकल्पना पनि कम मिथकीय छैन । थप यस रहरमा पुरातनप्रतिको किन्चित् मोह पनि छ ।
०२८ अघिको प्रवेशिका पाठ्यक्रममा अंग्रेजीको गद्यपाठ्यमा ‘इम्प्यारर्स न्यु क्लथ’ अर्थात् बादशाहको नयाँ पोशाक पढाइन्थ्यो, कवि वाल्टर्स स्कटको ‘प्याट्रियटिज्म’ अर्थात् देशभक्ति शीर्षकको कविता पनि अङ्ग्रेजी पद्यपाठ्य अन्तर्गत पढाइन्थ्यो । नैतिकता शिक्षाका विभिन्न पाठ्यहरु पनि पढाइन्थे । ०२८ अघि प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेका आजका कति सत्तासीन राजनेताहरुले त त्यो पढेका हुँदा हुन् ।
त्यस समय खण्डका नेपाली पाठ्यक्रमका गद्यपद्य पाठ्य पनि भाषा शिक्षण र असल चरित्र निर्माणका दृष्टिले तुलनात्मक रुपमा उपयोगी थिए । ०२८ को नयाँशिक्षा योजनाको ब्रुमरले यो सवै बढार्यो । अझ विशेषतः ०४६पछि नेपालमा देशभक्ति र नैतिकताका पाठहरु आवश्यक नै रहेनन् सवै बढारिए । पछि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट ‘निवारण’ बढारिएजस्तै गरी बढारिए । यसैले पनि अहिले बादशाहहरु आफ्ना ‘नयाँ पोसाक’का कथा पढ्दैनन् । सडकपेटीबाट बालकहरुले ‘हाम्रो बादशाह नाङगै !’ भनेर चिच्याए पनि सुन्दैनन्, सुने पनि नग्नताबोध गर्दैनन् । आफुले आफूलाई हेर्ने र बोध गर्ने त कुरै हरायो । हुनत हेर्नलाई पनि देख्नसक्ने आँखा त चाहिन्छ, जसरी सुन्नलाई ग्रहणशील कान चाहिन्छ, बुझ्नलाई विवेकशील मनमस्तिष्क चाहिन्छ ।
अन्तमा हामी पुराणजीवी सर्वसाधारण नेपाली जनहरु आत्मसम्मोहनकै लागि भए पनि कल्पना गरौं, सुखसमृद्धिको भव्य पुराण लागेको आजको नेपालमा नेपालीले सुखी र समृद्ध हुन जनता एक एकले आफैँ राष्ट्रपति हुनु पर्छ, आफैँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र हाकिम हुनु पर्छ, यसका लागि समाजवाद उन्मुख हाम्रो संविधानले बाटो छेकेको छैन ।
कल्पना गरौं, हाम्रो मुलुकमा तीन करोड जनता एक एक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र हाकिम बन्न सरदर कति वर्ष लाग्ला ? ती एक एकले ती ती पदमा पुग्न र समृद्ध बन्न के के गर्नु पर्ला ?
इतिश्री सुखसमृद्धि पुराणे नेपाल खण्डे अगस्त्यकुमार सम्वादे सत्तासीन स्वयम् दृष्टान्तो नाम सप्तमोध्यायः ।
समकालीन सन्दर्भमा विमर्शलायक केही बिम्बहरु
के यसरी नै चल्छन् राजनीतिक दलहरू ?
नबिलले ल्यायो ३६औं वार्षिकोत्सवमा नयाँ तथा अरु बैंकका ऋणीहरुलाई लक्षित अफर
आन्तरिक रणनीति बनाउन खुमलटार र बालुवाटारमा छुट्टाछुट्टै छलफल
सुशान्तको पैसा रियाले चलाउँथिन्, बैंक खाताको छानविन हुँदै
पहिलोपटक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति शुभारम्भ
विदेशमा अलपत्र परेकाहरुलाई सरकारी खर्चबाट स्वदेश फर्काउने सरकारको निर्णय
रौतहटमा सशस्त्र प्रहरीद्वारा पटका बरामद
पुतलीबजारमा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना